‘नो एकता, नो एकीकरण’ - Prabhav Khabar
‘नो एकता, नो एकीकरण’
काठमाडौं– नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच जुट्ने र फुट्ने क्रम चलिरहन्छ । सबैजसो दलहरू बिनाकारण जुट्छन् र बिनाकारण फुट्छन् पनि । पछिल्लोपटक नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टीदेखि साझा विवेकशील पार्टीसमेत फुटेको छ । एमाले फुटेर तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको छ । जसपा फुटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएको छ भने साझा र विवेकशील पार्टी फुटेर करिब–करिब पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएका छन् ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि अलग भयो । त्यसपछि एमालेसमेत विभाजित भइसकेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले साझा घोषणापत्रका आधारमा गएको प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभामा निर्वाचन लडेका थिए । उनीहरूको एकतालाई जनताले पनि स्वीकार गर्दै करिब दुई तिहाइनजिकको मत दिएका थिए । पार्टीभित्र आन्तरिक संघर्ष चर्कैँदै जाँदा अदालतले दुई पार्टीबीचको एकता बदर गरिदिएको थियो । ऋषि कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नामसँग एकीकृत पार्टीको नाम जुधेको भनी दिएको रिटमा अदालतले एकता बदर गरिदिएको हो ।
त्यसपछि सरकारमा रहेको एमाले सत्ताबाट बाहिरिएको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट समेत बाहिरिएको छ । एमालेबाहेकका दलहरूले गठबन्धन गरेका छन् । सत्तागठबन्धन दलहरूबीच आगामी निर्वाचनमा कार्यगत एकतादेखि पार्टी एकतासम्मको चर्चा चलिरहेको छ । केहीले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच नै फेरि एकता हुन सक्नेसम्मको चर्चा गरिरहेको छन् । केही मिडियामा एमाले र माओवादीका नेताहरूबीच एकताको विषयमा छलफल भइरहेकोसम्म समाचार सार्वजनिक भएका थिए ।
यस्ता चर्चाहरू चलिरहँदा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब आफ्नो पार्टीले अन्य कुनै पनि पार्टीसँग एकता नगर्ने बताएका छन् । उनले एमालेले एकता नगर्ने बरु अरु पार्टीमा रहेकाहरू एमालेमा भने आउन सक्ने बताए । युवा संघले बुधबार बनाएको साइबर सर्कल घोषणा कार्यक्रममा ओलीले एमालेले एकता गर्नुपर्ने कुनै पार्टी नरहेको बताए । ‘अब नेकपा एमालेले एकता एकीकरण गर्नुपर्ने पार्टी कुनै रहेन, त्यसकारण नो एकता, नो एकीकरण’ उनले भने, ‘जो साथीहरू हुनुहुन्छ आउनुस्,, एमाले मिलेर काम गरौँ ।’ ओलीले अघि भने, ‘एकता एकीकरणको वार्ता को सँग गर्ने ? माधव नेपालसँग गर्ने एकीकरण ? माधव नेपालले झुक्याएर लगेका साथीहरू निद्राबाट ब्यूँझिनुस् र फर्किनुस् ।’
अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको आन्दोलनलाई पाँच दलीय छट्पटीको संज्ञा दिएका छन् । ‘अहिले सर्वोच्च अदालततिर प्रकट भइरहेको छ । हामीलाई फ्याँकेको ब्रह्मास्त्र ठोक्किएर फर्किँदाखेरी आफैँलाई लागेर भएको छट्पटी हो,’ उनले भने, ‘यो केही होइन, देखिएको त्यहाँ (सर्वोच्च अदालतमा) छ । तर पाँच दलीय छट्पटी हो । यो कुराको प्रमाण सर्वोच्च अदालतका श्रीमान्् न्यायाधीशले अमेरिकाबाट इमेल पठाएर साविती बयान दिएका छन् ।’
ओलीले अदालतमा देखिएको आन्दोलनलाई नेकपा एमालेमाथि प्रहार गरिएको ब्रह्मास्त्र फर्किएर पाँच दलका नेताको टाउकोमा लागेको संज्ञा दिएका छन् । ‘यस लडाइँमा ब्रह्मास्त्रको प्रयोग हुने ठाउँसम्म पुगेछ,’ उनले भने । उनले न्यायिक क्षेत्रमा क्यान्सर भइसकेको तर धामीमार्फत उपचार खोजिएको पनि टिप्पणी गरे । ‘न्यायिक क्षेत्रमा क्यान्सर भइसकेको छ, तर त्यसको उपचार कसरी खोजिँदै छ भने धामी बोलाएर, कुखुराको अण्डा ल्याएर, दुनामा लगेर मन्सिने । त्यो विचरा अण्डा मन्साएर क्यान्सर निको हुन्छ ?’ उनले भने ।
अध्यक्ष ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पनि कटाक्ष गरेका छन् । माधव नेपालले हिन्दी फिल्मका भिलेनको डाइलग बोलेको भन्दै कटाक्ष गरेका हुन् । कांग्रेसका पिछलग्गुले एमालेलाई धाक दिन नसुहाउने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कतिले ठानेका छन्, अदालतको फैसलाबाट जनताका पक्षधरलाई पराजित गरियो । अन्तिम विजय ठानेका छन् । केही व्यक्तिहरूले बोल्दै हिँडेको सुन्नुभएको होला । एकजना सात वर्षजति अगाडि अध्यक्षको चुनावमा मसँगै पराजित भएको मान्छेले हिन्दी फिल्मको भिलेनको डाइलग बोलेछन् । के भनेछन् भने– जो हम्से टकराएगा ओ चुरचुर हो जायगा । सात वर्षअगाडि हारेको मान्छे । त्यसबेलाको चुरचुर भएको थियो ? मलाई अचम्म लाग्यो । कसरी बोल्न सक्या होला ।’
कांग्रेसको पुच्छर समातेर धेरै फूर्ति नलगाउन ओलीले चुनौति दिएका छन् । उनले भने, ‘यिनीहरू दुई चार दिनका मेहमान हुन् । अहिले कांग्रेसको पुच्छर समातेर बडा फूर्ति लगाइरहेका छन् । पिठ्यूँमा झिँगो बसेर कांग्रेसले यसो पुच्छर हल्लायो भने यिनीहरू कहाँ पुग्छन् कहाँ । कांग्रेसका पुच्छरले यत्रो धाक लगाउने एमालेसँग ?’ उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसलाई बिगार्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन् । दाहालबाट कुनै काम नभएको र अब कांग्रेसलाई बिगार्न सक्ने बताएका हुन् । एमाले बिगार्न नसकेर कांग्रेसलाई बिगार्न दाहाल लागिपरेको भन्दै ओलीले भने, ‘हामीलाई बिगार्न प्रचण्डले खोजेका थिए । तर, सकेनन् । अहिले कांग्रेसमा गएका छन् । म भन्छु, होसियार कांग्रेस प्रचण्डले सिध्याउलान् ।’ कांग्रेस दाहालको हात समाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्दै ओलीले कांग्रेस विचार र नीतिमा पनि पुरानो भइसकेको बताए ।
Published On: Thursday, November 25, 2021 Time : 2:51:22